Rooble Oo Tegaya Kismaayo, Si Uu Axmed Madoobe Ugala Hadlo Arrin Xasaasi Ah...
Rooble oo tegaya Kismaayo, si uu Axmed Madoobe ugala hadlo arrin xasaasi ah…
Muqdisho (Wararka Maanta) – Xog ay heshay Wararka Maanta ayaa sheegeysa in Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble uu maalmaha soo socdo safar ku tagi doono magaalada Kismaayo ee xarunta gobalka Jubada Hoose.
Safarka Ra’iisul Wasaare Rooble ayaa ku beegan maalmo kadib markii uu Madaxweynaha maamulkaas Axmed Madoobe ku laabto Kismaayo, kaasoo hadda jooga magaalada Nairobi ee xarunta dalka Kenya.
Ujeedada safarka Rooble ayaa lagu sheegay in ay tahay arrimo la xariira doorashada Soomaaliya iyo dhameystirka heshiiskii laga gaaray doorashada ka dhici doonto magaalada Garbohaarey ee xarunta gobalka Gedo.
Labada mas’uul ayaa la sheegay in ay halkaas ku dhameystiri doonaan waxyaabaha suurta gelin kara in Garbohaarey ay ka qabsoonto doorasho nabad ah, xilli dadka halkaas dagan aysan taageersaneyn maamulka Axmed Madoobe.
Maamulka Jubbaland waa maamulka kaliya ee uusan ilaa hadda tagin Rooble, waxaana la filayaa in safarkaan uu ka badalnaan doono kuwii hore.
Shirkii Golaha Wadatashiga Qaran ee Afisyoone ayaa lagu go’aamiyay abuurida guddi dib u heshiisiineed oo ka kooban dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada oo aysan ku jirin Jubbaland, guddigaas oo lagu soo magacaabayo 3 maalmood gudahood, taasi oo ka bilaabaneysa maalinta heshiiska la saxiixay.
Madaxda shirweynihii doorashada ee Afisyoone ayaa sidoo kale go’aamiyay in Rooble uu garwadeen ka noqdo amniga iyo dib u heshiisiinta gobolka Gedo, xili ay hore ugu sugnaayeen ciidamo si gaar ah uga amar qaata madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday. Go’aanka ay mas’uuliyada doorashada Gedo u saareen Rooble ayaa lagu sheegay si ay habsami uga dhacdo doorashada xildhibaannada.
Dhanka kale, madaxweynaha Jubbaland ayaa la siiyey awooda magacaabista xubno maamul cusub oo ay yeelato degmada Garbahaarey, waxaana lagu wadaa inuu kala tashto ra’iisul wasaare Rooble.
Wararka Maanta : Somaliland: 2 degmo oo cusub oo lagu dhawaaqay natiijada doorashada golaha ...
Sidoo kale waxaa la isla qaatay in Ciidamada booliska AMISOM la geeyo Garbahaarey, kuwaas oo sugaya amniga magaalada iyo goobta ay ka dhacayso doorashada.
Related Topics:arrinAxmedFeaturedhadloKismaayoMadoobeRoobletegayaugalaWararka MaantaXasaasi
Xoghayaha Qaramada Midoobey oo qaylo dhaan ka muujiyay xaaladda Tigray
Wararka Maanta : Juventus Iyo Chelsea Oo Xiiseynayaan Qadka Dhexe Barcelona Pjanic.
Wararka Maanta : Somaliland iyo Taiwan oo kala saxeexday heshiis caafimaad
Wararka Maanta : Wararkii ugu Danbeeyey Diyaarado Daroonis Cusub oo Lagu Qalabeeyey...
Wasiir Sacad “Soomaaliya taariikh deena ma hayso ee waa in aynu gaadhsina”
Isniin, Juun, 21, 2021 (Wararka-Maanta) – Wasiirka maaliyada Somaliland Sacad Cali Shire, ayaa sheegay in Soomaaliya ka mid tahay waddamada loo bahanyahay in Somaliland la baro.Wasiirka ayaa sheegay in loo bahanyahay in qadiyada iyo taariikhda Somaliland la gaadhsiiyo ururo iyo dowlado Soomaaliya kamid tahay.
“Cida ugu horaysa ee aynu u bahanahay in aynu qadiyadeena gaadhsiina waa Soomaaliya” ayuu yidhi.
“Soomaaliya taariikhdeena ma hayso marka waa in aynu gaadhsiino” ayuu hadaliisa ku daray.
Wararka Maanta : Turkiga oo farriin usoo direy dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed - Caa...
Wasiirka ayaa intaa ku daray in ay doonayaan in ay qadiyada Somaliland gaadhsiiyaan ururka AU ee Afrika iyo Qaramada midoobay.
Waa markii ugu horaysay ee Somaliland sheegto in ay taariikhda iyo qadiyada Somaliland barayaan dowlada Soomaaliya.
Maxkamadda ciidamada oo shaacisay cidda loo haysto dilkii Sheekh Cali …
Muqdisho (Wararka Maanta) – Maxkamadda Ciidamada Qalabka Sida ee Soomaaliya ayaa Maanta shaacisay Magaca qofkii ka dambeeyay dilkii 17/5/2021 deegaan hoostega Magaalada Gaallkacyo loogu geystay Allah unaxariisto Sheekh Cali Axmed Faarax Dhoore (Sheekh Cali Dheere) oo ahaa Maamulihii Guud ee Jamciyadda Imaamu Nawawi ee Gobolka Mudug.
Xeer ilaaliye ku xigeenka Maxkamadda Ciidanka Qalabka Sida Muumin Xuseen Cabdullaahi oo la hadlay Warbaahinta ayaa sheegay in guddi Saraakiil baarayaal ah oo ka socda Xeer ilaalinta maxkamadda & CID-da loo diray degaanka uu dilka ka dhacay .
Xeer ilaalinta ayaa sheegtay in guddigaas ay waqti badan geliyeen sidii ay u ogaan lahaayeen qaabka uu dhacay dilka marxuumkaas iyo cidda ka dambeyso, waxayna caddeymaha dilka ka qoreen dad markhaatiyaal ah.
Wararka Maanta : Xog: Taliyeyaal ciidan iyo saraakiil isbaarooyin dhigtay Muqdisho iyo...
Warka kasoo baxay xeer ilaalinta ayaa lagu sheegay in baaritaan dheer kadib ay xeer ilaalinta ogaatay in dilkaas uu ka dambeeyey Dable Cabdixakiin Cabdisalaan Aadan oo ka tirsan Ciidanka Saldhiga Booliska Gaalkacayo.
Xeerilaaliye Ku xigeenka aya intaa hadalkisa ku daray in dilka gacan ay ku siiyeen Askariga eedeysanayal kale ah ina Saciid Cabdi Xidig & ina baalbaal, oo dilka kadib u baxsady dhanka degmada Galodogob ee Gobolka Mudug.
Ugu dambeyntii Maxkamadda ciidanka Qalabka Sida ayaa sheegtay in guddiga barista dacwada ay soo saareen qodobada hoos ku xusan.
1) In Hay’adaha amniga Maamulada Puntland & Galmudug inay soo qabtaan eedeysanayaasha sare ku xisan, iyaga oo fulinaya Amarka Maxkamadda Ciidamada.
2) Hadii eedeysanayaasha aysan Maxkamadda hor-imaan ama aan la soo qaban muddo laba Bilood gudahood ah in Xafiiska Xeer ilaalinta Maxkamadda Ciidamada uu u gudbin doonaan Maxkamadda Ciidamada qalabka sida Galdacwadeedka eedeysanayasha, lana bilaabi doono dhageysiga kiiskooda lana xukumi doono, iyaga oo maqan.
3) In sidoo kale Guddiga ay u soo baxday in Saraakiisha Booliska ee qeybta Gobolka Mudug & Xafiiska la dagaalanka Argagaxisada ay sameeyeen waajib gudasho la’aan la xiriira dhacdadaan lagana qaadi doono tallaabo sharciga waafaqsan.
Eedeysanaha ayaa waxaa laga soo wareejiyey saldhigga Booliska Galdogob, wuxuuna ka tirsanaa Ciidamada Booliska Federaalka ah, waxayna xogta sheegeysaa inuu kamid ahaa askar ka tirsanaa Saldhigga Booliska Gaalkacyo oo loo xil saaray baaritaan lagu hayey Sheekha oo ay dacwad kusoo oogtay CID, isagoo si gaar ah u ahaa askarigii xabsiga kasoo saari jiray marka la wareysanayo Sheekha.
Warka Caalamka18 mins ago